Efa-taona ny fihaonana tany Cuba
Ho raisin’ny ao ROME ny fanamarihana ny fahefa-taonan’ilay fihaonana manan-tantara tany CUBA teo amin’i Papa François sy ny Patriarka KIRILL, lehiben’ny fiangonana orthodoxe rosiana.
Fihaonana izay nanokatra pejy vaovao eo amin’ny fifandraisan’ny eglizy 2 tonta. Marihana isan-taona io tsingerin-taona io ary atao hanamafisana ireo lohahevitra vaoarika tamin’ny fanambarana iombonana. Notanterahina tao Fribourg, tsiahivina, ny tsingerina-taona voalohany tamin’ny 2017. Tany Vienne kosa ny faharoa tamin’ny 2018. Natao tany Moscou ny fanamarihana fahatelo ary izao ho tanterahina any Rome izao ny fahefatra. Hihaona amin’i Papa François rahampitso alakamisy ao Vatican ny filohan’ny departemanta misahana ny fifandraisana amin’ny firenen-kafa eo anivon’ny Patriarkàn’i Moscou, ny métropilite Hilarion. Mialoha izany anefa dia hihaona amin’i Kardinaly Kurt Koch, filohan’ny filankevitra paontifikaly misahana ny fampiombonana ny mpino kristianina ny tenany. Notsiahivin’i Kardinaly Kock moa ny vontoatin’io fihaonana tany La Havane any Cuba io ka isan’ny navoitra ny tamin’izany ny nitondrana ireo “reliques” an’i Masindahy Nicolas tany Moscou sy Saint-Petersbourg tamin’ny taona 2017. Niarahan’ny orthodoxe sy ny katolika tany Russie ny fanomezam-boninahitra izany tamin’io fotoana io.